Date My Pet » Ahoana no Iatrehana Taorian'ny Break Up
Esory ny Ben & Jerry ny. Ary ny boaty ny sela. Satria ny fotoana mba avy any ka ataovy miaraka indray ny fiainanao. Dia tsy ho toy ny sasany mahagaga sarimihetsika tantaram-pitiavana avy hatrany izay mahazo ny olona iray, ary hifindra amin'ny manaraka eo amin'ny blink-maso. Fa ny fahazoana avy any ka mitandrina ny sainao mavitrika dia tsy mieritreritra loatra momba ny fiatoana-ny sy ny fotoana dia halazo ny fihetseham-po sy ny tsy hita maso latching kofehy izay teo am-ponao dia ho tapaka izany miaraka amin'ny fanampian'ny telo manaraka ireto safidy:
Ho be atao foana
Na dia ny asa na asa an-tsitrapo, na fifangaroan'ny roa na oniversite, na ny asa efa, lasa mifantoka izay. Tsarovy fa ireo zavatra ireo dia natao noho ny ho avy, ary aza avela misy fiatoana-ny mahazo an-dalana na dia tena sarotra dia afaka mahatsapa tamin'ny fotoana tsy. Ianao koa mety hitondra takariva kilasy. Fotsiny tsy mitafy ny tenanao ao amin'ny dingana. Kanefa kosa ny zavatra afaka ianao ho!
Resaho ilay izy amin'ny olona izay miahy. Raha henjana fanaovana ambony molotra ny any ivelany tsy misy mahamenatra eo amin'ny fandravana sy mamela ny fihetseham-pony momba ny fiatoana-up vulnerably mikoriana avy amin'ny fianakaviany sy ny namany. Izany, ka ny tsara ny saina sy ny lohan'ny ireo ranomaso izay bursting mba mivoaka na fantatrao izany na tsia. Maro dia maro ny olona miezaka ny hizaka ny fiatoana-up samirery ary tsy salama. Ny miresaka amin'ny olona izay tia anareo ny zava-hanisy ratsy anao kosa ianao dia ho afaka ny handray izao tontolo izao amin'ny lafiny mamiratra be ny ahiahy sy ny masony mamiratra kokoa.
Fantatro fa indraindray mety ho sarotra ny miala voly rehefa mandratra ianao. Fa izahao toetra ny sarotra mba hanosika ny alalan 'izany, satria dia ho very maina izany amin'ny farany. Mivoaka (rehefa tsy tapaka ianao!) ary mifalia amin'ny fianakaviana na ny namana ao amin'ny Pub, amin'ny fampisehoana na kira, sns … Ilaozy ny olana ao an-trano. Tandremo ny tenanao sy faly liana amin'ny fialam-boly toy ny famakian-teny, mihaino mozika sy mijery TV. Aza manaiky very teo ny olona ianao, satria vantany vao manao izany ianao dia afaka ny ho mafy lalana miverina any amin'ny toerana ianao. Ento ny fotoana amin'ny fitadiavana fitiavana vaovao. Aza mihevitra fanerena avy na iza na iza manao izany. Eo amin 'ny fotoana, Aoka ny fitiavana ao.
Yappily nanomboka teo: Vonona ny 'dia mitambatra Family'?
Inona Twitter no hampianatra anareo ny momba ny fitiavana?